Zvivi Zvedu Zvinogona Kuregererwa Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Hazvina kumbooma kuti tifarirwe naMwari
Maererano nezvinotaurwa neBhaibheri, vanhu vose vane zvivi. Tagara tichingoda kutadza nokuti takabva kumunhu wokutanga, Adhamu. Saka dzimwe nguva tinoita zvakaipa uye tinogona kuzozvidemba. Mwanakomana waMwari, Jesu Kristu akatifira kuti abhadhare zvivi zvedu. Chibayiro chake chorudzikinuro chakaita kuti tikwanise kuregererwa. Chipo chakabva kuna Mwari.—Verenga VaRoma 3:23, 24.
Vamwe vanhu vakaita zvivi zvakakura uye vanonetseka kana Mwari achikwanisa kuvaregerera. Zvinofadza kuti Shoko raMwari rinoti: “Ropa raJesu Mwanakomana wake rinotichenesa pazvivi zvose.” (1 Johani 1:7) Jehovha anoda chaizvo kukanganwira zvivi zvakakura kana tichipfidza zvechokwadi.—Verenga Isaya 1:18.
Tinofanira kuitei kuti tiregererwe?
Kana tichida kuti Jehovha Mwari atiregerere, tinofanira kudzidza nezvake. Izvi zvinosanganisira kunzwisisa nzira dzake, mazano ake, uye zvaanoda. (Johani 17:3) Jehovha anoregerera vaya vanopfidza zvakaipa zvavo voedza kusazviita zvakare.—Verenga Mabasa 3:19.
Hazvina kumbooma kuti tifarirwe naMwari. Jehovha anonzwisisa zvatinotadza. Ane ngoni uye ane mutsa. Mutsa wake worudo hauiti here kuti ude kuziva zvakawanda nezvokuti ungamufadza sei?—Verenga Pisarema 103:13, 14.
Mwari ane zita here uye anotida here?
Kuteerera Mwari kunokosha, asi pane zvimwe zvinodiwa kuti tive shamwari dzake.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI May 2013 | Mwari Ane Utsinye Here?